Kuchemwa kwaMai Tsvangirai Koratidza Zviri Mupfungwa dzeVanhu
Kurume 12, 2009
Vanhu vemuZimbabwe nepasi rose, vakarwadzikana zvikuru nekushaya kwemudzimai wemutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, Amai Susan Tsvangirai, mutsaona yemotokari iyo yakaitika svondo rapera mumugwagwa weHarare-Masvingo.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemakurukota ehurumende anobva kubato reZanu PF, vakaunganawo kumba kwaVaTsvangirai vachichema pamwe navo, asi havana kuzokwanisa kuenda kuBuhera kunoona Mai Tsvangirai vachiradzikwa. Vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvishanu, vanonzi vakaunganawo mubhuku rekwaHumanikwa kuBuhera vachionekana nemushakabvu.
Asi mibvunzo yava pamiromo yevanhu ndeyekuti pane zvidzidzo here zvingadzidzwa pakushaya, kuchemwa uye kuvigwa kwaAmai Tsvangirai. Vamwe vari kuona chiitiko ichi senzira ingangosimbisa hurumende yemubatanidzwa iripo iyi, zvichitevera mashoko akataurwa naVaMugabe ekuti vanhu vasiye nyaya dzemhirizhonga, kunyange hazvo pakaitika mhirizhonga kuBuhera musi wakaradzikwa Mai Tsvangirai.
Mukukurukura nyaya iyi, Jonga Kandemiiri weStudio7 akabat nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, pamwe naVaErnest Mudzengi, vanowe National Director weNCA.
Hurukuro naProfessor John Makumbe pamwe naVaErnest Mudzengi (1)
Hurukuro naProfessor John Makumbe naVaErnest Mudzengi (2)